China kemeghi ya igwe haịd Crusher emepụta na suppliers | Onye na-eme brik
Nke a hama crusher bụ kemeghi na mmetụta crusher. Onye na-emegharị ihe na-emeghasị ihe nwere ikike zuru ezu maka ịkụcha ihe, na-eme ka ihe ndị ahụ ghara ịkụda ya n'okpuru mmetụta nke isi hama na nkwekọrịta ya na oghere mgbochi.
Ugbo elu na-eguzogide mgbochi na-emeziwanye ọnụọgụ nke ịkụ ihe ahụ, si otú a mezuo ebumnuche nke ịkụcha ihe ahụ nke ọma (ngụkọta ngụkọta ngụkọta: 30% n'okpuru 0.5mm, 25% n'okpuru 0.8mm, 30% n'okpuru 1.5-2.0mm, 15 % n'okpuru 3.0mm).
Igwe ahụ nwere mmetụta ka ukwuu, ájá ọzọ, obere ihe na-alọghachi, ma nwee ike belata ájá na-akpaghị aka. E jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị yiri ya, mmepụta ahụ dị ihe dị ka 30% karịa na ike oriri mmepụta ihe dị ka 40% pere mpe.
Isi hama na liner na-eguzogide ọgwụ na-adị mfe iji dochie ya, a na-edozi efere mgbochi na efere ala ihuenyo. Ọ bụ ezigbo akụrụngwa maka ndinuak ike shale, coal gangue, ores.
Ọrụ Ngwaọrụ ndinuak
Workingkpụrụ ọrụ Oma egwepịa
Ф 1600 × 1200
a) Nyocha nyocha kwesịrị ime tupu ịmalite, wepụ ihe mgbochi na-emetụta ọrụ ma lelee ịdị mma nke biarin.
b) Onye na-etipịa akụ na-amalite na-agba ọsọ n'okpuru enweghị ibu, na ihe nhichapụ ígwè agbanwuru. Mgbe arụ ọrụ nkịtị, a na-eri nri ahụ n'ụzọ zuru ezu.
c) Mgbe ịkwụsị, onye na-eri nri kwesịrị ịkwụsị ya, mgbe ahụ, a ga-agbanyụ ya, wee gbanyụọ onye na-ewe ihe ọkụ.
d) Ngwongwo ndi na-emebisighi ike enweghi ike iba n'ime igwe ogwu, ma aghaghi imechi ya ma oburu na enwere ihe ojoo.
e) A machibidoro iwu iji ihe ọ bụla nyochaa akụrụngwa mgbe ọ na-agba ọsọ.
f) A ga-etinye mkpuchi mkpuchi na spindle pole na moto pole.
g) Lelee njigide arịlịka na njikọta njikọ iji gbochie ha ịtọpụ.
h) Lelee ihe oriri ugboro ugboro.
i) Mmiri mmiri nke ihe ndị na-abanye na crusher kwesịrị ≤12%.
j) Lelee mkpuchi nke isi hama na hama pin mgbe niile iji gbochie ihe ọghọm nke isi hama na-ada n'ihi oke oke nke isi na hama pin.
k) Mgbe iyi akwa okpu agha ezughi oke, aghaghari isi ya ma were ya. Mgbe a na-edochi isi hama, a ghaghị ijigide nguzozi bụ isi nke akụkụ ndị na-agbagharị. Ihe di iche di iche di na isi hama na ihe omuma gha aghagh igafe 150g.
Nke gara aga: Ugboro abụọ rotor Hammer Crusher
Osote: High Speed ​​Ugboro abụọ ala Crusher